Mbatata inokura yenharaunda yeKursk - "Potato System" magazini
в Nharaunda, Nhau dzedunhu
Nzvimbo yedunhu: 29,997 zviuru mamaira2.
Vagari: 1 117 378 vanhu, vacho 66,88% vagari veguta.
Nzvimbo: iyo nzvimbo iri pakati peEuropean chikamu cheRussia, iri chikamu cheCentral Federal District.
Mamiriro ekunze: inodziya kondinendi, ine inodziya uye inodziya mwaka, inotonhora ipfupi uye ine hunyoro. Mwedzi unotonhora zvikuru ndiNdira. Iyo nguva yenguva ine yakanaka pakati nepakati tembiricha yemazuva ese mazuva makumi maviri nemashanu pagore kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero uye mazuva mazana maviri nemakumi maviri kuchamhembe nekumabvazuva kwenharaunda. Kuwanda kwemvura yakakwana zvakakwana kuve nechokwadi chegoho repamusoro rezvirimwa zvekurima. Nekudaro, kunaya kuri kwakanyanya kusagadzikana uye kusingaenzanisirwe munzvimbo uye nekufamba kwenguva. Kusanaya uye mhepo dzakaoma dzinoonekwa mune mamwe makore.
Zororo racho. Nharaunda yenzvimbo iyi iri pamawodzanyemba akadziva kumadokero kweCentral Russian Upland, nzvimbo ine makomo yakasimudzwa inokwana 177-225 m pamusoro pegungwa uye yakaparadzirwa kwazvo nemipata yemupata, makomba mazhinji nemipata.
Ivhu. Ivhu dema rinokunda mudunhu (74% yenzvimbo yacho), iro rese igrey sango masango (grey grey, grey uye grey grey).
Nzvimbo yekurima: 2 146 zviuru mahekita, kana 72% yenyika dzese mudunhu, ivhu rinorimwa - 1 628 zviuru mahekita, kana 54%.
Iyo bazi rezvekurima inoramba iri chinhu chakakosha chehupfumi mudunhu reKursk. Iyo itsva, yemazuva ano yekurima nzira yakanangana nekushandiswa kwemichina inobereka kwazvo, hunyanzvi hwekuchengetedza zviwanikwa, uye mhando dzinogadzira mhando dzembeu uye kubereka kwemhuka zvakavakwa mune yezvemagetsi maindasitiri akaoma enharaunda.
Tichishandisa sosi iyi neration, iyo yekudhinda-maindasitiri yakaoma yedunhu haina kungova yeumwe wevatungamiriri veCentral Federal District mukudyara kwezvinhu zvese zvakakosha zvekurima zvigadzirwa, asi zvakare yakave imwe yevakakurisa vayo muRussia yose Federation.
Zvinoenderana nefungidziro yekutanga, kugadzirwa kwezvirimwa zvakakura zvekurima kumabhizinesi emapato ese muna 2014 zvinosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Masangano ezvekurima anoita zvikamu makumi matanhatu neshanu muzana kubva muzana zvekurima. Iyo indasitiri yekugadzirwa kwekurima inosvika 99 muzana, iri 62,5 muzana inotaurisa kupfuura zvarongwa.
Muna 2014, zviuru gumi nezvitanhatu zvemazana ematani embatatisi uye zviuru gumi nezvitanhatu zvematani miriwo zvakagadzirwa, izvo zvinosangana zvakakwana nezvinodiwa zvevanhu vemudunhu iri mukugadzirwa uku.
Kuwedzera kwekukohwa kwezvirimwa uye goho rakakura rezvigadzirwa zvezvirimwa kwakawanikwa zvakanyanya kuburikidza nekushandisa matekinoroji emazuvano uye nekuvandudzwa kwemuchina netirakita meli. Muna 2014, varimi vekurima mudunhu vakatenga 302 matirakiti matsva, 118 zviyo uye vakohwi vakadyara, pamwe nehuwandu hwemimwe michina yepamusoro yekushandisa yekurima inokwana mabhiriyoni 3,6 mabhiriyoni.
Kursk mudunhu rimwe rematunhu ane magariro mbatatisi kugadzirwa. Panyaya yekurima, chirimwa ichi chinotora nzvimbo yechitatu mudunhu mushure membeva neshuga beets. Uye mumakore achangopfuura, kufarira mbatatisi kubva kumakambani ekudyara mari, mabhizinesi ezvekurima, dzimba dzevarimi (varimi) dzimba dzakakura zvakanyanya. Kutarisa kwakadaro kunokonzerwa nekukosha kweagrotechnical yetsika seyakafanotenderera mukutenderera kwezvirimwa, pamwe nekunyanyisa kwehupfumi hwekugadzira. Zvinoenderana nefungidziro dzenyanzvi dzekomisheni yezvematongerwo enyika yedunhu, kurima mbatatisi inokwanisa kupa mukana wekusvika zana muzana kana kudarika.
ZAO Agrofirm Maodzanyemba.
Kubva 2011, iyo Mbatata Project yakavambwa. Nhasi, purazi rinorima mbatatisi munzvimbo inopfuura mazana matatu mahekita. Iyo purojekiti inopa sangano rekutenderera kuzere kugadzirwa, kuchengetedza, kutengesa zvisati zvaitika uye kutumira mbatatisi kumabhizimusi ekugadzirisa. Inotengeswa uye mbatatisi yembeu dzinodyarwa.
Icho chikamu cheEkoNiva-APK, imwe yevakakurisa vanogadzira mbeu dzezvirimwa mumunda muRussia. Gore rega rega, mabhizimusi ezvekurima ekambani anogamuchira kusvika pamatani zviuru makumi maviri embeu dzakasimbiswa dzezviyo, mbesa, miriwo yemidzi uye mbatatisi. Kugadzirwa kwembeu kunosanganisira akasiyana marudzi echiRussia, Chiyukraine, ChiGerman, ChiFrench, Scandinavia neCanada. Zashchitnoye LLC inorima mbatatisi yembeu panzvimbo inosvika mahekita zana nemashanu.
Basa repakarepo remapurazi ematatata enharaunda nhasi kuwedzera goho. Chinangwa chikuru ndechekuita dunhu iri mumwe wevatungamiriri mudunhu iri kugadzirwa nekugadziriswa kwetsika inoshanda uye inobatsira, sezvo paine mamiriro ese eichi. Hazvina kuitika kuti nyika dzenharaunda dzinofarira zvikuru varimi vekunze.
Muna June 2015, panguva yeCentral Russian Economic Forum muKursk, kambani yekuChina Morn Group yakapa kuHurumende yeKursk Region chirongwa chekukura nekugadzirisa mbatatari nekudyara kwemamiriyoni makumi maviri nemashanu emamiriyoni. Nyanzvi dzeChinese dzinoronga kukura kusvika kumatani zviuru zvinomwe nemazana mashanu ematani embatatisi pagore paKursk dema ivhu. Zvakare, Boka reMorn rinoda kuvaka danga re starch mudunhu reKursk rine huwandu hwematani zviuru zana nemazana pagore. Vamiririri vekambani vanotarisira kugashira mhedzisiro yekutanga chirongwa ichi panosvika gore ra 20.
Vladimir Bychikhin - mbatata grower kubva Kursk kunze
Murimi Vladimir Bychikhin anobva kuOboyanskiy dunhu reKursk nharaunda muna 2013 akagamuchira rubatsiro rwemamiriyoni zana nemakumi maviri ema ruble ekuvandudza bhizinesi rake rembatatisi. Akave anotora chikamu muchirongwa chakanangwa "Tsigiro yevarimi vadiki uye nekuvandudzwa kwemapurazi ezvipfuyo zvemhuri pahwaro hwevarimi (vega) mapurazi e1,2-2013".
Kunyangwe iyi huwandu hwakakura isiri mari yekutangisa, zvakabatsira murimi kukwira netsoka dzake zvakasimba, kuunza mazano ake kuhupenyu. Makore akati wandei apfuura akatanga kubuda mumunda mudiki. Nhasi kudyarwa kwembatatisi kweVladimir Bychikhin anopfuura mahekita makumi mana.
Wat mbatatisi dzakasimwa nevarimi dziri mukudiwa kukuru. Kangani paakatora mbatatisi yake kuenda kunharaunda yedunhu, kazhinji kazhinji yaitengwa pakarepo. Vladimir Bychikhin ane chokwadi chekuti gore rino harizove rakasiyana.
Uye rutsigiro rwemunyika rwanga rwakakosha kumurimi kuitira kuti abhadhare mhodzi dzakakura dzinobereka mbeu uye kusimudzira hupfumi hwazvo mberi.